Izindaba - U-anyanisi wezitshalo wesizini uyaphuma!
Enye yezingxenye ezivuzisa kakhulu zomsebenzi wami njengomlaleli olula yizinto ezincane nonke enihlanganyela nami, noma ngabe ukudla okuzenzela, izindaba ezimayelana namazwe enu, isithombe semikhiqizo yezolimo eniyilimayo emazweni, noma okuhle kakhulu konke, ukubona izitshalo esizivunile eminyakeni edlule ngokuzumayo kuqhuma kusuka embewini ngaphakathi kwenhlabathi kuye ekululekeni izihlangu zazo. [engeza i-crop pic lapha phakathi] Umphefumulo omuhle wabelane ngalesi sithombe ngenhla nami ngempelasonto edlule. Kufingqa konke ebengizama ukukusho lapha kule minyaka eyishumi edlule. Ngingathola umoya omude ngokwanele kulesi sikhala ngezikhathi ezithile. Anginalutho nakancane engingangeza kulelo nothi elihle.
U-anyanisi wethu utshalwa ngenkathi yasekwindla minyaka yonke, ngaphandle kukanyanisi omncane onezimpande kuphela okhula engxenyeni ebanda kakhulu enyakatho. Njengoba sonke sazi, inkathi anyanisi ngaso sonke isikhathi ibonakala ifushane kakhulu. Iqiniso lakho ukuthi sihlala endaweni eshisayo, emanzi, futhi enomswakama. Ezishisayo, ezimanzi, nezinomswakama yizimo ezifanele zezinhlamvu zezifo zezitshalo ezizalayo. Senza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi siqala ngezitshalo ezinempilo kunazo zonke, bese sinika inhlabathi konke okungafunwa yisitshalo. Isikhathi esifushane sokuthuthela esimweni sezulu esomile, noma sisebenzisa ama-fungicides amaningi amabi, imvamisa sithola isikhathi sokuvuna samasonto ambalwa. Sithole amaviki ambalwa ka-anyanisi kulo nyaka; ngokwesilinganiso, futhi ngicabanga ukuthi bekungukuhamba kahle okuhle kwalokho okwakungokwindla efaneleke kahle.
Iminikelo kaNovemba ingathola ukukhanya okuncane njengoba ukunakwa kwethu okuningi kuphendukela ekutholeni izitshalo zonyaka owa kanye nobusika, ngakho-ke sonke sinezinto ezinhle esingazidla engxenyeni engemuva yonyaka emapulazini.
Okokugcina, ungathanda ukubheka iwebhusayithi yethu esanda kusungulwa? Ipulazi le-anyanisi le-AGR lifuna ukuzwa kuwe! Chofoza kulesi sixhumanisi www.primeagr.com bese uveza izwi lakho! Siyabonga njengenjwayelo ngebhizinisi lakho, futhi ube neviki elihle!